Shacabka oo ka cabanaya isbaaroyinka Ciidamada dowlada ee wadada Afgooye | warsugansomaliya.wordpress.com
Waxaa maalintii labaad hakad ku jiray gaadiidka shacabka ee ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho iyo magaalada Afgooye ee gobalka Shabeelada Hoose.
Wadayaasha Gaadiidka shacabka ayaa bilaabay inay hakiyaan hawlahooda kadib markii ay kusoo bateen wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye isbaarooyinka ay dhiganayaan qaar kamid ah ciidamada dowlada federaalka ee ku sugan nawaaxiga ceelasha biyaha.
In ka badan 15 isbaaro ayaa la sheegay inay yaaliin wadada Muqdisho iyo Afgooye u dhaxeysa kuwaasi oo ay askarta gaadiidka uga qaadaan lacag badan oo ay ugu yartahay 50.000 oo shilling Soomaali ah, taasi oo culeys weyn ku noqotay gaadiidleyda oo sheegay in rasaas loogu hanjabo hadii ay bixin waayaan lacagahaasi.
Taliska ciidamada Militariga ee Dowlada Federaalka ayaa shalay (Arbaca) shaaciyey inay hawlgalo wadaan isla markaana u qabtay ciidamada isbaarooyinka dhigtay 48 saac inay halkaasi ka qaadaan isbaarooyinka.
Balse shacabka ku dhaqan deegaankaasi iyo kuwa kale ee wadada mara ayaa sheegay in isbarooyinkan lasoo dhigo wadada xiliyada barqadii isla markaana laga qaado duhurkii, arrintaasi oo ay ku micneeyeen ciidamada oo raba inay lacagtii ay qaadka ku cuni lahaayeen xooga uga qaada gaadiidka wadada mara, arrintan ayaa la sheegay inay la xariirto ciidamada dowlada oo aan helin mushahar ku filan.
Taliska Militariga ayaa shalay mar ay warsaxaafadeed soo saareen ku sheegeen in ay jiraan askar dowlada ka tirsan oo dhigta isbaarooyinka, balse sidoo kale ay jiraan dad rayid ah oo dareeska ciidamada wata iyo kooxo arrimo siyaasadeed ka wata, waa sida ay hadalka u dhigeenee
Ciidamo ilaalo u ah Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Soomaaliya oo la qabtay iyagoo Miino Aasaya(Fadeexad Soo Waajahday..)
← Xukuumadda Federaalka ah oo ka soo horjeesatey doorashadii Madaxweynaha ee Jubaland.
Golaha Wasiirada xukuumada Federaalka Soomaaliya oo kulankoodii caadiga ahaa Muqdisho ku yeeshay →